လူသားအားလုံးအတွက်: နည်းပညာများ လေ့လာမျှဝေ ရေးသားနေသူ ဘလော့ကာ အမျိုးကောင်းသား နှင့် အင်တာဗျူး
စာဖတ်သူများ အားလုံးမင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။
နေ့စဉ် ဆော့ဝဲလ်များ နည်းပညာများ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပက်သက်တာတွေ နည်းပညာတွေကို သူကိုယ်တိုင် လေ့လာပြီး လေ့လာဆဲ လူငယ်တွေအတွက် မြန်မာလို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်အောင် အွန်လိုင်းက သူရဲ့ဘလော့လေးမှာ နည်းပညာတွေကို နေ့စဉ် မျှဝေပေးနေတဲ့ ဘလော့လေး တစ်ခုကို တွေ့ထားပါတယ်။ အခုလို အိုင်တီ ခေတ်ကြီးထဲ ဆော့ဝဲလ်များ နည်းပညာတွေက လူငယ်တွေအတွက် တစ်ထောင့် တစ်နေရာက တော်တော်များများ အသုံးဝင်ပါတယ်။
ဒီလို နည်းပညာတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး မျှဝေပေးနေတဲ့ ဘလော့လေး တစ်ခုကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီတစ်ခါ စာဖတ်သူများကို မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဘလော့ကာလေး တစ်ယောက်ကို အင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတော့ မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ စာဖတ်သူများ အားလုံး စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နည်းပညာ လေ့လာနေတဲ့ လူငယ်တွေတော်တော် များများလည်း သိလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဘလော့ကာ အမျိုးကောင်းသား ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ဝဘ်ဆိုက်တွေ တော်တော်များများနဲ့ သူ့ရဲ့ဘလော့လေးမှာ သူလေ့လာမိသမျှ ဆော့ဝဲလ်နဲ့ နည်းပညာတွေကို နေ့စဉ် တင်ပေးလျှက် ရှိနေပြီး နည်းပညာ လေ့လာနေတဲ့ လူငယ်တွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေတဲ့ ဘလော့ကာလေး အမျိုးကောင်းသား နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် လေးတွေကို ဒီလို မေးမြန်းဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ အစ်ကို ....
မေး = အစ်ကို နည်းပညာ တွေကို ဘယ်တုန်းက စတင်လေ့လာဖြစ်လဲ ?
ကျွန်တော် 2010 လောက်နေစပြီးတော့ လေ့လာခဲ့တာပါ။ ဘလော့တော့ မဖွင့်ရသေးဘူးပေါ့။
မေး = ဘလော့နာမည်က အမျိုးကောင်းသား ဆိုတော့ နာမည်အရင်းလည်း ဒါမှမဟုတ် ရွေးချယ်ပေးဖြစ်တဲ့ နာမည်လား ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး။
ရွှေးချယ်ပေးတဲ့ နာမည်ပါ အမျိုးကောင်းသား နာမည်အစ ကတော့ ချောကလက်မြိုတော် ဆိုဒ်မှာ အသုံးပြုဖို့ ရွေးရင်းနဲ့ အဲဒီ နာမည်ကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုခဲ့တာပါ။
မေး = ဘယ်တုန်းက ဘလော့လေးကို စတင်ပြုလုပ်ပြီး ရေးဖြစ်တာလဲ ?
ကျွန်တော် ဘလော့မရေးခင် (နိုင်)ဆိုဒ်တွေမှာ ဆော့ဝဲလ် တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပိုစ့်တွေ တင်နေပါပီ 2010 လောက်မှာ ပိုစ့်တွေ တင်ရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ဘလော့လုပ်ဖို့ အကြံပေးတော့ 2011 လောက်7ပိုင်းလောက်မှာ ဘလော့ကို စဖွင့်ဖြင့်ခဲ့ပါတယ်။
မေး = လူတိုင်း လူတိုင်း အရာတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင် ရည်ရွှယ်ချက်တွေ ရှိကြပါတယ်။ အခု အစ်ကိုရဲ့ ဘလော့လေးကို ဘယ်လို ရည်ရွှယ်ချက်နဲ့ လုပ်ဖြစ်သွားလဲ ?
ဟုတ်ကဲ့ ... ရည်ရွှယ်ချက်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆော့ဝဲလ် တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး တစ်နေရာတည်းမှာ စုံစုံလင်လင်ရနိုင်အောင် ရည်ရွှယ်ပြီးတော့ လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ တကယ်တော့ အွန်လိုင်းမှာရှာရင် ကိုယ်လိုချင်တာ အလွယ်တကူရပါတယ်။ ဘယ်မှာမှ ရှာစရာ မလိုမလိုအောင် လို့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ဂိမ်းတွေ စသည်ဖြင့် စုံစုံ လင်လင် ရအောင် တတ်နိုင်သလောက် စုစည်းတော့ ပြန်လည် မျှဝေတာပါ။
မေး = အစ်ကို နည်းပညာဖက်ကို ဘယ်လိုဝါသနာ ပါပြီး လေ့လာ ဖြစ်သွားလဲ ?
အဲဒါကျတော့ ပြောရခက်တယ်။ သူများ အဆင်ပြေအောင် ကိုယ်အားတဲ့အချိန်မှာ အများ သူငှာအတွက် အကျိူးရှိမယ်ထင်လို့ အချိန်ပေးပြိးတော့ လုပ်ရင်း ၀ါသနာပါသွားတာဘဲ (ကိုယ့်ကိုကိုယ် နည်းပညာ ဆိုဒ်လို့တော့ မခံယူသေးပါဘူး )
မေး = ဘလော့ကို စလုပ်တဲ့ အချိန်က ဘယ်လို လေ့လာပြီး စတင်ခဲ့ပါသလဲ ?
သူများရေးထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို လေ့လာရတာပေါ့။ အများဆုံး လေ့လာဖြစ်တာတော့ ကိုညီနေမင်းဆိုဒ် ကိုနေမင်းမောင် ဆိုဒ်တွေကို လေ့လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘလော့ Settings Template တွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘလော့ စဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ တစ်လလောက် လေ့လာပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဆိုဒ်ဖွင့် ထားတဲ့ သူမရှိတော့ ဘယ်ကိုမှ မေးလို့ရပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုလေ့လာရင်း Settings Template နည်းနည်း ပါးပါး နားလည် လာပါတယ်။
မေး = ကိုယ်တိုင် လမ်းညွန်မှု မရှိပဲ လုပ်ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ အစ်ကို အနေနဲ့ ဘယ်လို အခက်အခဲနဲ့ လေ့လာဖြစ်သလဲ ?
လမ်းညွန်မှုမရှိတော့ အစမှာ တော်တော်ကို ခက်ခဲ့ပါတယ်။ ဖွင့်ချင်စိတ်ပါကုန်တယ်။ ဒါပေမယ် မလျှော့သော ဇွဲနဲ့ Google မှာ ရှာပြီးတော့ လေ့လာ ရပါတယ် လေ့လာရင်းနဲ့ HTML အကြောင်း နည်းနည်းပါးပါး သိလာပါတယ်။
မေး = ဘလော့တစ်ခု စတင်လိုက်ပြီ ဆိုတော့ ဆော့ဝဲလ်များနဲ့ နည်းပညာ လိုင်းကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ဖြစ်သွားလဲ ?
ဘယ်လို ရွှေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ဘလော့ မဖွင့်ခင်ကတည်းက ဆော့ဝဲလ်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီးပိုစ့်တွေ ရေးသားနေတာဆိုတော့ (ဇတ်လမ်းတွေ ရေးဖို့လည်း စိတ်ကူးရှိပါတယ် ) ဘလော့စဖွင့်တော့ ဆောစ့်ဝဲလ် လိုင်းကို ရွေးဖြစ်သွားပါတယ်။
မေး = ဘလော့လေးက နည်းပညာနဲ့ ပက်သက်တာတွေ တော်တော်များများ တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို မျှဝေဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင် ဆော့ဝဲလ်ပိုင်း နည်းပညာပိုင်းတွေကို ဘယ်လို လေ့လာသလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေး စေလိုပါတယ်။
အစပိုင်းမှာဆိုရင် ဆောစ့်ဝဲလ်အတွက် လိုင်စင် ရှာရင်းနဲ့ ဗိုင်းရပ်လည်းခဏခဏထိပါတယ် ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ စကိုင်တော့ ကွန်ပျူတာဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိသေးပါဘူး သင်တန်းတွေလည်း မတတ်ဖူးပါဘူး ဘာမှမသိညာမှန်းမသိဘဲ သုံးရင်း ကွန်ပျူတာလည်း ခဏခဏပျက် ခဏခဏ ၀င်းဒိုး တင်ရတာပေါ့ အစပိုင်းမှာတော့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆောစ့်ဝဲလ်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘယ်လို လိုင်စင်ယူရတယ် အသုံးပြုရတယ်ဆိုတာ နားလည်လာပါတယ်။
မေး = ကွန်ပျူတာပိုင်း နဲ့ ဆောဝဲလ်ပိုင်း နည်းပညာပိုင်းကို ဘယ်လိုလေ့လာ သင်ယူခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ဗဟုသုတ ရအောင် ဖြေပေးပါဦး ။
ကိုနေမင်းမောင် ဆိုဒ်နဲ့ ကိုညီနေမင်း ဆိုဒ်မှာ ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာတွေ လေ့လာဖြစ်ပါတယ် စိတ်ထဲကနေ ဆရာ တင်ထားတဲ့ ဆိုဒ်နှစ်ဆိုဒ်ပေါ့ ဆောစ့်ဝဲလ်ပိုင်းကျတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လေ့လာရင်း နားလည် လာပါတယ်။ အဲလိုသိဖိုလည်း အချိန် တော်တော်ပေးရပါတယ် အမေအဆူအဆဲခံပြီးတော့ ကို လေ့လာခဲ့ရတာပါ။
မေး = နည်းပညာပိုင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး လေ့လာချင်ပေမဲ့ မသိတာတွေ နားမလည်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နည်းပညာပိုင်းကို မသိလို့ နားမလည်လို့ တစ်ခုခု ဖြစ်နေတယ်တဲ့ လူငယ်တွေကို အစ်ကိ်ုအနေနဲ့ ဘာများ ပြောချင် မှာချင်လဲ ?
ဘယ်လိုပြောရမလည်း လေ့လာပေါ့ဗျာ လို့ဘဲပြောရမယ်။ အင်တာနက်ဆိုတာ အသုံးချတတ်သူ အဖို့တော့ ရတနာသိုက်ဘဲလေ ပြီးတော့ နည်းပညာ စာအုပ်တွေဖတ် ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် လေ့လာ အဲလိုလုပ်ရင်းနဲ့ နားလည် တက်ကျွမ်းပြီးတော့ အချိန်ပေးရင် အချိန်ပေးနိုင်သလို နားလည်လာနိုင်ပြီး ဆရာကောင်း သမားကောင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်တော့ စီးပွားရေး နယ်ပယ်အထိ ရောက်အောင် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာဆိုတာ ကိုယ်တိုင် လေ့လာမှသာလျှင် ကျွမ်းကျင်းပြီးတော့ နားလည်လာမှာပါ။ ဘယ်ပညာရပ် မဆို ကိုယ်တိုင် အပင်ပန်းမခံရင် မတတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။
မေး = ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုတဲ့ လူငယ်တွေ ကွန်ပျူတာ အကြောင်းကို လေ့လာနေတဲ့ လူငယ်တွေကို ဘယ်လို လေ့လာ သင့်သလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး ?
ကွန်ပျူတာ အကြောင်း လေ့လာမယ်ဆိုရင် ပထမ အချက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာလေး ရှိမှ အဆင်ပြေမှာပေါ့။ ဘာလို့ဆိုတော့ စာတွေ့ကြီးဘဲ လေ့လာနေရင် ဖတ်တုန်း မှတ်တုန်း သင်တုန်းဘဲ မှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာရှိတော့ လက်တွေ့ လေ့လာနိုင်တော့ ပိုပြီးတော့ သိလွယ် တတ်လွယ်တာပေါ့။ လေ့လာရင်းနဲ့ အခြားသော ပြသနာတွေကိုလည်း ဖြေရှင်းတတ်ပြီး နားလည်လာမှာပါ။ အဓိကတော့ လေ့လာ မှတ်သားပါ ပြီးရင် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါ။ အဲဒါဆို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နာလည် တတ်ကျွမ်းလာပြီး တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့် စီးပွားရေး အဖြစ်တောင် အသုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
မေး = ဆောဝဲလ်ပိုင်း ကွန်ပျူတာ နည်းပညာနဲ့ ပက်သက်ပြီး လေ့လာ သင်ယူရတာ လွယ်တယ်လို့ တစ်ချို့က ပြောကြပါတယ်။ တကယ့် လေ့လာနေတဲ့ လူငယ်တွေကို အစ်ကို အနေနဲ့ ဘယ်လို ပြောမှာလဲ ?
လွယ်တယ်လို့ ပြောတဲ့ သူကတော့ အခြေခံ အဆင့်လောက်ကို နားလည်ပီးတော့ ပြောတာပါ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေက ပိုအဆင့်မြင့်လာလေ ပိုခက်ခဲလာလေပါဘဲ ပညာဆိုတာ ဆုံခန်းတိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
လေ့လာ လေတွေ့ရှိလေ့ပါဘဲ ပိုလေ့လာလေ ပိုတွေ့ရှိလေပေါ့ဗျာ။ တကယ် လေ့လာတဲ့ ညီငယ် တွေကို ပြောချင်တာကတော့ ကိုယ်ဝါနာပါမယ် ဆိုရင် တစိုက် မက်မက်ကြိုးစားပါ။ လေ့လာပါ ပြီးတော့ မရှက်ပါနဲ့ ကိုယ်မသိဘူးဆို မသိဘူး မနားလည်ဘူးဆို မနားလည်ဘူး ဆိုပြီးတော့ ဆရာ ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူ ကိုမေးပါ လေ့လာသူအဆင့်မှာ ငါဆိုတဲ့ မာနကိုချတာ ထားအကောင်းဆုံး ပါဘဲ။
ပညာရှာ သူဖုန်း စားပမာလို့ စကားပုံတောင်ရှိသေး တာဘဲလေ ပညာသင် လေ့လာသူ အဆင့်မှာ ရိုးသားပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သိသလို တတ်သလို ဟန်ဆောင်ရင်တော့ တကယ်နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
မေး = အစ်ကိုက ဆော့ဝဲလ်ပိုင်း နည်းပညာဖက်ကို ဦးစားပေး ရေးသားနေတယ် ဆိုတော့ အခုလို နည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ နည်းပညာတွေက ဘယ်လို အရေးပါ အရာ ရောက်လဲဆိုတာ အစ်ကိုရဲ့ အမြင်လေးကို ပြောပြ ပေးပါဦး။
နည်းပညာက အရေးပါပါတယ်။ အခုလို တိုးတက်နေတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို သတင်းတွေ အချိန်နဲ့အမျှ သိနိုင်ပါတယ် ဂျာနယ်မှာ စောင့်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ထွက်မယ့်နေ့ကို စောင့်ရအုံး နည်းပညာက တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ အသုံးချစရာ တွေကလည်းများလာပါတယ်။ အဓိကတော့ နိုင်ငံခြား စီးပွားရေး တွေကို လေ့လာရင် သိနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ခေါ်ရင် အင်တာနက် ရှယ်ရာ ဈေးကစားရင်လည်း အင်တာနက် တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး လုပ်တဲ့အခါ အင်တာနက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာဘဲလေ နောက်ပြီး ကျောင်းသားတွေ အတွက်လည်း အင်တာနက်မှာ လေ့လာမယ် ဖြေမယ် လုပ်စရာတွေက အများကြီးပါဘဲ နည်းပညာက တိုးတက်ရင် တိုးတက်သလို သူနေရာနဲ့သူ အသုံးချနိုင်တဲ့ နေရာတွေအများကြီးပါ။ ကောင်းတဲ့သူ ကောင်းတဲ့နေရာ အသုံးချသလို မကောင်းတဲ့ သူတွေကလည်း မကောင်းတဲ့ နေရာမှာ အသုံးချ နိုင်ပါတယ်။
မေး = ဘလော့ကာ တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘာတွေ နားလည်ဖို့ လိုအပ်သလဲ ဆိုတာ ဘလော့ရေးသူ ဝါသနာရှင်များ သိအောင်လည်း ပြောပြပေးစေ လိုပါတယ်။
HTML အကြောင်းကို ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် နားလည်မယ်ဆိုရင် ကောင်းတာပေါ့ နားလည် ဆိုဖို့ဆိုတာလည်း လေ့လာမှရမယ်လေ။ အဲဒါတွေနားလည်ပြီ ဆိုရင် ဆိုဒ်မှာ ကိုယ်ပြင်ချင်တာတွေ ထည့်ချင် တာတွေ လှအောင် ပြင်ဆင် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပြောလို့ ကျွန်တော်ကို ကျွမ်းတယ် မထင်ပါနဲ့ နားလည်ဆိုတယ် ဆိုယုံအဆင့် လောက်ဘဲရှိပါ သေးတယ်။ အဓိကတော့ HTML CODES တွေကို နားလည်ရမှာပေါ့။
မေး = အစ်ကိုရဲ့ဘလော့လေးမှာ နေ့စဉ်ဝါသနာ အရ ပိုစ့်တွေ တင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ တစ်ခြားအလုပ်တွေ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာကိစ္စလေးတွေ အတွက်နဲ့ စိတ်ညစ်စရာတို့ ကြုံခဲ့ရမှာပေါ့။ ဘာလော့ကာတိုင်း ငွေမရပဲ ဝါသနာ အရ ရေးနေကြတယ်ဆိုတော့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ လူတွေလည်း အနည်းနဲ့ အများတော့ ရှိကြပါတယ်။ အစ်ကိုကိုယ်တိုင်ရော ဘလေ့ာလေးနဲ့ ပက်ပြီး ဒီလို ကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသလဲ ?
လူရယ် လို့ဖြစ်လာရင် စိတ်ညစ်စရာ တွေတော့ ကြုံရတာဘဲလေ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာကတော့ အခုထိ အဆင်ပြေပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိခဲ့ ကိုယ်ဆိုဒ်ကို ဖွင့်ကြည့်တဲ့ အခါ ပျောက်သွားပါတယ် ကျွန်တော်ဆိုဒ်က ကျွန်တော် အတွက်တော့ အပန်းဖြေရာ တစ်နေရာပါဘဲ ... ....
မေး = ဘလော့ရေးသူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘလော့လေးရေးတဲ့ အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရင်ထဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ပီတိဖြစ်မိတာ လေးကို မျှဝေပေးပါဦး ?
အဲဒါက .... ဘယ်လိုပြောရလည်း ပြောပြမတတ်ဘူး ကျွန်တော် ဆိုဒ်ထဲဝင်လိုက်ရင် ဘယ်သူတွေက စီဘောက်မှာ အော်သွားလည်း မေးထဲမှာ ဘယ်သူတွေက ဘာတွေ ပို့ထားလည်းဆိုပြီး ကြည့်ပါတယ်။ ဘယ်သူကတွေက အဆင်ပြေတယ် လို့ပြောသွားရင် ကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာပျော်ပါတယ်။ လိုင်းမကောင်းတဲ့ ကြားက ၀ါသနာရော စေတနာပါ ထည့်ပြီးတော့ လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့လေးပါ ကျွန်တော်တို့မှာ ကွန်နက်ရှင် မကောင်းပါဘူး အဆင်ပြေတယ် ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ရေးထားတာလေးကို ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဆိုဒ်မှာ နေ့စဉ်Update ဖြစ် ကြိုးစားပါတယ် ဘယ်လို ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြ မတတ်အောင်ပါဘဲ။
မေး = ဘလော့ရေးတဲ့ လူတိုင်း စိတ်ညစ်စရာတော့ အနည်းအများတော့ ရှိကြပါတယ်။အစ်ကိုရော ဘလော့လေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေ တစ်ခုခု မကောင်း ပြောဆို တာတွေမျိုးပေါ့ ဒါမှ မဟုတ် တစ်ယောက်က အထင်လွဲတာတို့ပေါ့ အစ်ကို အနေနဲ့ ကြုံဖူးလား ?
အင်း ... အဲဒါ တစ်ခုကတော့ ကံကောင်းတယ်ဘဲ ပြောရမလား မကြုံဖူးသေးပါဘူး ....
မေး = အစ်ကိုရဲ့ ဘလော့လေးမှာ တင်ပေးဖြစ်တဲ့ (မျှဝေဖြစ်တဲ့) အမျိုးအစား လေးတွေကို စာဖတ်သူများအတွက် အသေးစိပ် ပြောပြပေးပါဦး။
အဓိကတော့ အသုံးဝင်မယ်ထင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် ကိုတင်ပေးပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ် ထဲမှတောင် ပရိုမိုးရှင်းပေးတဲ့ တရားဝင် လိုင်စင်ပေးတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်ကို တင်ပေးပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ် တွေမှာ ဗားရှင်း အသစ်တစ်ခုတိုးလာတဲ့ အချိန် လိုင်စင် ပေးပါတယ်။
ကိုယ်ယူတတ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ အဲဒါတွေကိုအဓိက ပြန်လည် မျှဝေပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး သူများ တောင်ဆိုထား တာတွေကို ရှာဖွေပြီး ပြန်လည် တင်ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး ဂိမ်း ဖုန်းနဲ့ပက်သက်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ဂိမ်းတွေကို တင်ပေးပါတယ်။
မေး = ဆက်လက်၍ ဘလော့လေးကို ဘယ်လိုကြိုးစားသွားမယ်ဆို ဖြေကြား ပေးစေလိုပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် အားလပ် အချိန်တွေ အကုန်လုံးကို ဘလော့ထဲမှာဘဲ နှစ်မြုပ်ထားတာပါ ကျွန်တော် အင်တာနက်သုံးလို့ရနေမျှ ဘလော့က အသက်ရှင်နေအုံးမှာပါ ပေးဆပ်နေအုံးမှာပါ။
မေး = နေ့စဉ် အစ်ကိုရဲ့ ဘလော့လေးကို နည်းပညာ ဝင်ရောက် လေ့လာသူတွေ တစ်နေ့ကို လူဦးရေ ဘယ်လောက် ရှိနေပြီလဲ ?
တစ်နေ့ကို 2187 ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်တစ်နေ့ကိုတော့ အနည်းဆုံး 1780 နဲ့ အများဆုံး 2204 ၀န်းကျင် အတွင်းမှာတော့ ရှိပါတယ်။
မေး = အစ်ကိုရဲ့ဘလော့လေးက တ်ာတော်များများ လူသိများတယ်နော် ပြီးတော့ နည်းပညာများ ဝင်ရောက် လေ့လာနေသူတွေလည်း တော်တော်များပါတယ်။ အခု အချိန်မှာ ကိုအမျိုးကောင်းသား ဘာလော့လေး အောင်မြင်နေပြီလို့ ပြောရင် အစ်ကို ဘာပြောမှာလဲ ?
အောင်မြင်တယ် လို့တော့ မပြောချင်ပါဘူး ကျွန်တောင်ဆိုဒ်ကို သံယောဉ်ဇဉ် ရှိပြိး နေ့တိုင်း လာလည်တဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုဒ်ကို လာလည်ကျတဲ့ လာလေ့လာကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ပေးဆပ်မှာပါ ဆိုဒ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော ကျွန်တော်ကိုခင်ပြီး လေးစားတဲ့ ညီ အကို တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြောင့် ကျွန်တော် ဘလော့တင်ရတာ အားရှိပါတယ် ဆိုဒ်ဖွင့်စကဆို တော်တော်ကို စိတ်ပျက်ဖူးပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် ကျွန်တော် ဘလော့တင်ရတာ ပျော်ရွှင်နေပါပြီ။ အကိုရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက ကျွန်တော်အတွက် စိတ်တက်ကြွဖို့ ကောင်းတဲ့ စကားလုံးပါ အားပေးကျတဲ့ အခြား သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျေးဇူး တင်အရမ်းတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး = အစ်ကိုဘလော့မှာ ရေးတင်နေတဲ့ နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာပိုစ့်လေးတွေကို အစ်ကိုဘလော့လေးမှာပဲ တင်ဖြစ် မျှဝေဖြစ်လား တစ်ခြား ဝက်ဆိုက်တွေ ဘလော့တွေ မှာရော မျှဝေဖြစ် တင်ပေးဖြစ်လား ?
အရင်ကတော့ အခြားဆိုဒ်တွေမှာပါ (Ning Sites) မျှဝေပါတယ် အခုလည်း အားရင် အားသလို မျှဝေပါတယ်ခ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်က Ning Sites ကနေ ဘလော့ ကိုကူးပြောင်းလာသူဆိုတော့ Ning Sites ကို သံယောဇဉ် မပျက်သေးပါဘူး အားတဲ့ အခါတိုင်း ပြန်လည် မျှဝေပါတယ်။
မေး = အစ်ကိုရဲ့ ပညာအချင်း နဲ့ အလုပ်အကိုင် နေရပ်လိပ်စာလေးကို ပြောပြပေးနိုင်မလား ?
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော် 10 တန်း မအောင်ပါဘူး အဲဒီအတွက်လည်း စိတ်မပျက်ခဲ့ပါဘူး မိသားစု အခြေကြောင့် ပြန်ဖြေချင်ပေမယ့်လည်း မဖြေခဲ့ရတဲ့အတွက် ၀မ်းလည်းမနည်းခဲ့ပါဘူး။ အခုကျွန်တော် ပန်းထိမ်လုပ်ပါတယ်။ အမေဆိုင်မှာ ရွှေလည်းဝိုင်းရောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘွဲ့မရပေမယ့် ကျွန်တော်မှာ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းရှိတဲ့ မသိမ်ငယ်ခဲ့ပါဘူး နေတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ဘက် အစွန်ဆုံးပိုင်း နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ ကော့သောင်းမြို့မှာနေပါတယ် လမ်းကြုံတဲ့အခါလည်း ကော့သောင်းမြို့ ဈေးထဲက ရွှေဇင်ဦး ရွှေဆိုင်ကို လာလည်ပါ လို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
မေး= ဘလော့ရေးသူ ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၁၅၀၀ အချစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘယ်လို ခံယူ နားလည်ထားတာလဲ ?
အဲဒါကတော့ ပြောရခက်တယ်ဗျ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က အမြင်ချင်းမတူကြဘူးလေ ကျယ်ပြန့်တယ် ကျွန်တော်က ဘယ်လို နားလည်ထားလည်းဆိုတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အားပေးမှုတွေ နားလည်မှုတွေနဲ့ အချစ်ကို တည်ဆောက်ရတယ် လို့ထင်ပါတယ်။
မေး = ကိုအမျိုးကောင်းသားရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်များက အစ်ကိုရဲ့ အချစ်ရေး/အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်း စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ ဘယ်လိုပြန်ပြောပေးရမလဲ ?
အင်း ... ကျွန်တော်မှာ လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွှယ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် သူနဲ့ဘဲ လက်ထပ်မှာပါ ။ ကျွန်တော် မိဘကတည်း သဘောတူပါတယ်။ သူက ကျွန်တော် အပေါ် အရမ်းနားလည် ပေးတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို အရမ်းချစ်ပါတယ်။
မေး = အစ်ကို နားလည်ထားတဲ့ မိသားစု ချစ်ချင်း သံယောဇဉ် ၅၂၈ အကြောင်းလေးကို ဖြေပေးပါဦး။
ကျွန်တော်က တော့ ကျွန်တော် အမြင်နဲ့ဘဲ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကြီးသူကိုရိုသေပြီး ရွှယ်သူကိုလေးစား ငယ်သူကို သနား အဲဒါတွေက သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး မောင်နှမတွေ အထဲမှာလည်း အဲလိုဘဲ စိတ်ထားရပါတယ်။ ဒါမှ မောင်နှမတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ချစ် ခင်ခင်ဖြစ်နေမှာပါ ကျွန်တော်တို့မှာ မောင်နှမတွေလည်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မိသားစုက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်လှန် လေးစားမှုတွေနဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ကိုယ် မောင်နှမထဲမှာ အကြီးဆိုပြီးတော့ အငယ်တွေကို အနိုင်မယူပါနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ နားလည်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး = အစ်ကိုရဲ့ ဘဝမှာပေါ့နော် ... အစ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ခုက ဘာလေး ဖြစ်နိုင်မလဲ ?
ကျွန်တော်ဖြစ်ချင် တာတော့ ကိုယ်မိသားစုနဲ့ ဘ၀ကို အဆင်ပြေပြေ နဲ့ ရိုးရိုး ရှင်းရှင်းဘဲ ဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် ဘ၀ဆိုတာကို ကိုယ်ဖြစ် ချင်တိုင်းဖြစ်ဖို့ မလွယ်ဘူးလေ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဖြစ်တဲ့ဟာ ဘ၀ နေချင်တဲ့ ဘ၀ကို ရောက်အောင် ကြိုးစားမှာပါ။
မေး = ကိုအမျိုးကောင်းသားရဲ့ ဘလော့လေးကို လေလာနေသူ စာဖတ်ပရိတ်အားလုံးအတွက် အစ်ကို ဘာများပြောချင်လဲ ?
မေး = အစ်ကိုက နည်းပညာပိုင်းကို အများအတွက် အကျိုးပြုနေတယ် ဆိုတော့ လေ့လာဆဲ လူငယ်တွေ အတွက် အစ်ကိုရဲ့ ဘလော့လိပ်စာလေးနဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ရနိုင်မယ့် အီးမေးအကောင့်လေး ကို ပေးပါဦး။
ကျွန်တော် ဘလော့လိပ်စာကတော့ http://www.amyokaungtarr.com/ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကို ဆက်သွယ် ချင်တယ်ဆိုရင် flowerboy100@gmail.com အမြဲရှိပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေ တောင်းဆို ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အခက်အခဲတွေကို အကူအညီ တောင်းချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်မရွေး တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
အခုလို အင်တာဗျုး မေးမြန်းသမျှကို အချိန်ပေး ဖြေကြားပေးသော ဘလော့ကာ ကိုအမျိုးကောင်းသား ဒီထက်ပိုပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းများကို လူငယ်တွေ အတွက် မျှဝေနိုင်ပြီး အောင်မြင်သော ဘလော့ကာ လေးအဖြစ် ဆော့ဝဲလ်များဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများကို တစ်ထောင့် တစ်နေရာကနေ အများအကျိုး အတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေး လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ .... ကျွန်တော်ကို လည်း မအားတဲ့ကြားက အချိန်ပေးပြီး မေးမြန်းတဲ့အတွက် Online Radio Media (Malaysia)မှ ညီလေး ဘလော့ကာ နေဇော်လင်းကို လည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ သိချင် တာလေးတွေ တော်တော်လေး ပြည့်စုံနေပြီ။ နည်းပညာ လေ့လာနေတဲ့ သူတွေ အားလုံးအတွက် ဘလော့ကာ ကိုအမျိုးကောင်းသား http://www.amyokaungtarr.com/ မှာ အသေးစိပ် ဆော့ဝဲလ်များ နည်းပညာများကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ် ဆိုတာ အသိပေး ပြောကြားရင်း ဒီလအတွက် ဘလော့ကာ အင်တာဗျူး အစီအစဉ်လေးကို ဒီနေရာလေးမှာ ရပ်နားခွင့် ပြုပါ ခင်ဗျာ။
နောက်ထပ် ဘလော့ကာ မိန်းကလေး ထဲက ကိုယ်တိုင်ရေး ရသ စာပေ စာရေးသူ တစ်ယောက်ကို ရွေးထားပါတယ်။ စာဖတ်သူများ ဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲ ? ခန့်မှန်းကြည့်ရအောင် နောက် တစ်ပတ်မှာ ပြန်ဆုံမယ်နော် .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
( မလေးရှား အွန်လိုင်း ရေဒီယို မီဒီယာ)
24 Hours' Live Online Radio Media (Malaysia)
Posted by နေဇော် လင်း at 11:28 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မလေးရှားနိုင်ငံ ကပုန်း(၇) ရက်သားသမီးများ နာရေးကူည...
ကပုန်း နာရေးကူညီမှု အသင်းမှ တတိယအကြိမ်မြောက် သွေး...
မာစီဒီးမှ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ကား နည်းပညာ မိတ်ဆက်
နေဇော်လင်း ဆိုက်မှ စာဖတ်ပရိသတ်များသို့ အသိပေးအပ်ပါ...
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2012, August လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ...
နည်းပညာများ လေ့လာမျှဝေ ရေးသားနေသူ ဘလော့ကာ အမျိုး...